PayStand: Aqbal kaararka amaahda iyadoo aan lagaajirin khidmad ganacsi | Martech Zone
PayStand: Aqbal kaararka amaahda iyadoo aan lagaajirin khidmad
Tuesday, April 15, 2014 Talaado, Oktoobar 7, 2014 Douglas Karr
Markii aan ku dhex daray nidaamkeenna qaansheegashada iyo kaararka kaararka deynta waxaan aad uga naxay sida ay u adag tahay iyo ka dib inta lacag ah ee ay ku qaataan macaamil ganacsi. Kadib waan naxay waxaan ku khasbanaaday inaan helo laba nidaam processor processor kareedhit iyo akoon ganacsi. Faa'iidada kaliya ee aan haystay waxay ahayd inaan awoodo inaan ku sameeyo bangigeyga - laakiin dabcan waxay ku dhagan yihiin lacagaha dhowr maalmood si ay u kordhiyaan dulsaarkooda. Ugh.
PayStand dhawaan la bilaabay oo laga yaabo inuu wax ka beddelo warshadaha. Paystand wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag ka hesho shabakadaada iyo shabakadahaaga bulshada iyada oo aan software dheeraad ah, sireed ama u baahan koonto ganacsade. Aqbal kaararka amaahda waaweyn, eCheck, iyo eCash dhammaantood khidmad macaamil majiro ururkaaga.
PayStand waxaa ka mid ah astaamaha soo socda:
Websaydhyada Mobilada ee la dhisay - Naqshad kasta oo toos ah waxay kujirtaa waayo-aragnimo moobiil gaar ah oo u dhiganta qaabka guud ee PayStand-kaaga, sidaa darteed waxyaabahaagu waxay si fiican ugu eegi doonaan qalab kasta, mar kasta.
Link Links - Shey kasta oo aad abuurto wuxuu ku siinayaa xiriirin si garasho leh u garanaya halka laga furayo. La wadaag xiriiriyahaaga xariifka ah Facebook, Pinterest, Twitter, Email, ama shabakadda oo dhan.
Maaraynta Dalabka - amarada la soco, u jawaab macaamiisha, soo dir rasiidhada cadcad, tixaha la raaco, la xiriirida macluumaadka dhoofinta iyo waxyaabo kale oo badan.
Meelo badan oo Bakhaarro ah - ku dheji PayStand boggaaga, boggaaga PayStand, Facebook, Tumblr, WordPress, ama meel kale. PayStand waxay amaradaada oo dhan ku wada maamushaa hal meel, dhamaan meelahaaga dukaamada.
Noocyada Shayga Badan - ku bixi noocyo badan oo shay ah dhammaantood bogga buuggaaga. Iibi oo rar alaabada jireed, soo rar alaabada dhijitaalka ah iibka, qaado lacagaha, ama aqbal deeqaha.
Bilaash PayStand WebStore - isticmaale kasta oo PayStand ah wuxuu helaa PayStand khadka tooska ah ee WebStand Page iyo cinwaan u gaar ah url.
Iibso Hada Button & Embeds Website - Ku darista iibso Hada Button ama ku darista PayStand boggaaga waa u fududahay sida hoos u dhaca fiidiyowga Youtube.
Rarista Sawirka Jawaabta leh - PayStand waxay u oggolaaneysaa sawirro badan shay kasta oo la soo bandhigo waxayna soo saartaa dhowr nooc oo miisaan ah oo feyl kasta oo sawir ah oo la soo rogay. Sawir qaadeheena wuxuu ogaadaa oo xushaa cabirka muuqaalka ku habboon si loogu rakibo qalab kasta iyo shaashad kasta - oo ay ku jiraan aaladaha Apple-ka ee wata Retina Displays.
Xiriirrada Bulshada - Si otomaatig ah u muuji xiriiriyeyaasha shabakadaha bulshada shay kasta oo la abuuray, adigoo u oggolaanaya martidaada inay wax la wadaagaan oo ay kaaga hadlaan shabakad kasta oo weyn. Macaamiishaadu xitaa way awoodaan sida adiga iyo share risiidhadooda.
Toosinta Bogga Facebook - PayStand waxay ku siinaysaa Codsi Facebook ah oo bilaash ah kaas oo ku dhex milmaya bogaggaaga Facebook. Macaamiishaadu si toos ah ayey wax uga iibsadaan Facebook iyaga oo aan ka bixin boggaaga (taas oo ka caawinaysa ka hortagga luminta iibka).
Noocyo badan - U qaabee shay, lacag bixin, ama tabarucaad ikhtiyaarro kala duwan leh sida cabbirka, midabka, nooca, ama sanduuqa. PayStand waxay kuu ogolaaneysaa inaad dejiso qiimaha iyo raadinta alaabada mid kasta oo ka mid ah kala duwanaanshahaaga la qaabeyn karo.
Universal Posting / Sharing - Adeegso PayStand's Universal Posting tool si aad si fudud ugula wadaagtid alaabtaada barxad kasta oo bulsheed iyo kanaal isgaarsiineed hal mar. Meelaha badan ee aad ka weynaato dhagaystayaashaadu.
Xalka Dhammaantood - wax kasta oo aad u baahan tahay si aad lacag u qaadato oo aad wax ugu iibiso internetka. Wax walba waa lagu daray. Ma jiro koontooyin martigelin oo dheeri ah, kuwa lacag-bixinta, xisaabaadka baayacmushtarka, naqshadeeyayaasha websaydhka, barnaamijyada, softiweerka maareynta nidaamka, ama madax-xanuunno kale oo caadi ah oo lagama maarmaan ah!
Dhiirrigelinta Fiidiyowga - kudar muuqaal fiidiyowga kujira liiska shaygaaga adoo adeegsanaya Youtube ama vimeo ku duub koodh
Naqshadeynta Naqshadeynta Tooska ah - Dhammaan bogagga PayStand waa kuwo wax ka qabta oo ka shaqeeya aalad kasta oo moobiil ah, iPad-yada, ama cabbirka shaashadda kombiyuutarka iyo xallinta.
Sharaxaadaha Qalabka kudar sharraxaad shay oo kuu oggolaaneysa inaad qaabeeysid noocyada qoraalka, qurxinta qoraalka, sawirrada, xiriiriyeyaasha, fiidiyowyada, iyo wixii intaa ka badan.
Xiriirka Tooska ah ee Macaamiisha - PayStand waxay ku siineysaa cinwaanno emayl iyo cinwaanno rar si aad ugu suuq gayso macaamiishaada.
Taageero Qoraalo Badan - U oggolow dad badan inay ka caawiyaan maamulida iyo socodsiinta mid kasta oo ka mid ah xisaabaadkaaga PayStand.
Tags: processor kaarka deyntaistaag mushaharkhidmadaha macaamil ganacsiboqolkiiba eber
MassiveImpact: Qiimaha Waxqabadka Shabakadda Xayeysiiska Moobilka
Apr 15, 2014 at 3: 36 PM
Waan jeclahay tan, Doug! Waan sii baari doonaa maxaa yeelay tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dambeeya ee aan iska daayay inaan ka gaabiyo bilaabista khadka tooska ah. Adigaa ugu fiican!
Apr 21, 2014 at 1: 50 PM
Tan ma loo isticmaali karaa in lagu ururiyo tabarucaadka ololayaasha siyaasadeed?